गरिब*लाई सहयोग गर्नु नै धनी हुनु हो – बिल गेट्स!कृपया सेयर! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
गरिब*लाई सहयोग गर्नु नै धनी हुनु हो – बिल गेट्स!कृपया सेयर!
पैसा कमाएर मात्र हैन, पैसाको सहि सदुपयोग गर्दा मात्र धनि बन्न सकिन्छ । कमाएर लोभ गरेर जम्मा गरेर मात्र राख्ने नगर्नु । याद गर्नु त, तपाईले कति पैसा त त्यसै फिजुल खर्च गरेर सक्नु भएको छ । यदि त्यो अलिकति पैसा तपाईले कुनै गरिबलाई दिनु भयो भने तपाईको धर्म हुनेछ । गरिबलाई सहयोग गर्नु भनेको पनि धनि हुनु नै हो । त्यसैले आफुले कमाएको बाट थोरै भए पनि एउटा गरिबलाई दान गर्ने गर्नुहोस ।
बिल गेट्स त्यो नाम हो जब हामी कम्प्युटरको बारे सोच्छौं तव उनलाई सम्झिन्छौ। उनलाई कम्प्युटरको पिता मानिन्छ। उनी माइक्रोसफ्ट, विश्वको सब भन्दा ठूलो कम्प्यूटर सफ्टवेयर कम्पनीको मालिक हुन ।
गेट्स एक सफल उद्यमी, लगानीकर्ता, समाजसेवी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर र आविष्कारक हुन । उनले आफ्नो सबै आविष्कारहरू र जीवनको हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोगको कल्पना गर्न एक दूरदर्शी दृष्टिकोणको साथ कम्प्युटरलाई घरेलू उत्पादनमा रूपान्तरण गरे। यहाँ तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्न बिल गेट्सका केहि प्रेरणादायी भनाइहरू छन्।
२. आफूलाई यस संसा*रको कुनै अरु व्यक्ति संग तुलना नगर्नुहोस् । यदि तपाईंले त्यसो गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफैले अपमान गरिरहनु भएको छ।
४. जीवन सजिलो छैन – यस्तै जिन्द*गीको बानि पार ! जीवन अरुले तयार पारि दिएर प्रयोग गर्न रेडि भएको सामान जस्तो हुदैन जो सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । जीवन दुख कस्ट र समस्याले भरिएको हुन्छ ,जीवनबाट असन्तुष्ट हुनुको सट्टा यसलाई स्वीकार गर्न उत्तम हुन्छ।
९ . यदि तिमी*लाइ तिम्रो शिक्षक कठोर लाग्छ भने मालिकको प्रतीक्षा गर ।
नोट: साथै तपाईलाई यो जान*कारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Previous हामी कुनै पनि हालतमा एकबद्दता हुन सकेनौ दुख लाग्छ:सामाजिक अभियन्ता सुजन लिम्बु
Next जुवा*डेमाथि सातदोबाटो वृत्तको एक दिनमा तीन अपरेशनः १६ जु*वाडे प*क्राउ
“राजेन्द्र महतो,लाई ‘सिंहदरबार प्रवेश निषेध”
50 seconds ago मेचीमहाकाली संवाददाता